मिलन संग्रौला -
सासै फेर्दा पनि सकस हुन्छ भने बाँच्नुको के अर्थ? तर्क पनि आफ्नै किसिमको निकाल्यो कच्चा दिमागले। तिनै तर्कनामा मनलाई मच्चाउँदै डायल गरिरहेँ तिम्रो नम्बर। दर्जनौँचोटि एउटै कुरा झर्को नमानी भनिरहने त्यो महिलाको स्वर सुनेर दाह्रा किट्दै थेँ म। खालि उपलब्ध हुन सकेन। मलाई तिम्रो उपलब्धिसँग मतलब भएन अब। मात्र चाहियो, एउटै प्रश्नको उत्तर। किन चुपचाप यति निठुरी बन्यौ तिमी? कसरी बुन्न सक्यौ, त्यति सशक्त झूटो प्रेमजालो? भलै मैबाट सुरु भएको थियो, धागो बाटिन। म त त्यो कहिल्यै नचुँडिनेमा विश्वस्त थिएँ। तिमीले त त्यसलाई डल्लो पारेर एकैचोटि कता मिल्काइदियौ कता! किन?
'वास्तवमा मैले किन आफूलाई यति कमजोर र असहाय अनुभव गरेको होला - म मेहनती र इमान्दार छु, काम गर्ने शिप छ भने जीवनसँग किन हार्ने - जीवनप्रतिको दृष्टिकोण सवैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने के छ र - म आफ्नै पाराको उन्मुक्त जीवनशैली जिउने कल्पना गर्दै निवास प्रवेश गरेँ ।
सम्पदा रिजाल -
- रश्मी रैखोला -
शिव अर्याल -
ऊ बेला मुनाले आफ्ना मदनको बाटो छेक्न सकेकी थिइनन्। अहिले मदन हार खाइरहेको छ।’ अन्ततः ऊ ‘केयर गिभर’ को ट्याग भिर्दै इजरायल हान्निएकी थिई। ‘अहिलेसम्म त केही बिग्रेको छैन। यताको चिन्ता छैन। हरपल मन त्यतै डुलिरहन्छ। छोरीलाई पुरा अवधि स्तनपान गराउन सकिन। आफ्नी आमाका रसिला दुधे स्तन चुस्न आँ गरिरहेकी उसको मुखमा तितेपाती कोचिदिएँ मैले। आधारभूत बालअधिकार समेत उपभोग गर्न पाइन उसले, मेरै कारणले। डर लागिरहन्छ, मलाई भोलि के भन्ली उसले?’
अव त्यसपछि मैल बोल्ने केही देखिन, मस्तिष्कमा शुन्यता छायो। तै पनि अन्तिम प्रयत्न गर्दै भनेँ, ‘हेर त्यसो नभन, म त बर्वाद हुन्छु, कसैको अगाडि मुख देखाउनलायक हुन्न, म त मरे पनि हुन्छ। तिम्रो पनि भविष्य ड्यामेज हुन्छ, के सोचेर यस्तो निर्णय गर्यौ?'
सञ्जीव थापा -
सहमति कोठामै बसिरहन्छे। उ तयार हुदै होली भनेर आफ्नै कामधन्दामा व्यस्त हुन्छन् आमा, भाउजू । साँझ हसिलो मुहार लिएर आइपुग्छ आग्रह। भाउजू आग्रहलाई चिया दिएर भान्सामै लाग्छिन निरन्तर। आमा सहमतिको ढोका ढकढक्याउन थाल्छिन्। निकै बेर बोलाउदा पनि ढोका खोल्दिन सहमति, न त कुनै प्रतिउत्तर नै दिन्छे। आमाको मनमा डर र शंका मडारिन थाल्छ र अतालिदै घरका सबैलाई बोलाउछिन्।
दीपक घिमिरे -
बाध्यतामा खाडी छिरेको मलाई रहरले छिरेको जस्तो व्यवहार सबैले गर्छन्, आफन्त, साथीभाइ सबैले। मोज गरेको छस् यार भन्ने साथीभाइ र कति उतै बस्छस्, अब त आइज भन्ने घरपरिवार सबैले मेरो बाध्यता बुझ्दैनन्। अस्ति फेसबुकमा चिल्लो कारको अघिल्तिर उभिएर खिचेको एउटा फोटो पोष्टिय। दुर्गेले कमेन्ट गर्दै भन्यो– ‘वाउ हेन्सम ! मस्ती छ है।’ अनि त्यसैको तल राजुले लेख्यो– ‘लास्टै हेन्सम भएको छस्, के खान्छस् ?’
-सुरेन्द्र प्र. जोशी -
पुरूषोत्तम अधिकारी -
चटयाङ्ग मास्टर -
जेफरी आर्चर , भावानुवादकः दण्डपाणि जैसी -
केही दिनपछि पहिलो पटक ऊ मेरो नजिक अचानक आएका थियो। म शिरमा सिन्दुर हालिरहेकी थिएँ। हो कि हैन जस्तो गरी मेरो पिठमा उसले छोएर गयो। जस्तो वतासले छोएर जान्छ। त्यति मधुरो छुवाई कति गाढा बनेर मेरो तनमा पोतियो। त्यही छुवाईले मलाई तनवीरको सम्पूर्ण जीवनमा प्रवेश गर्न तानिरह्यो। त्यही छुवाईको डोरीले कसेर मलाई दिवानी बनायो। र, सायद उसलाई पनि!
कुलराज पौडेल -
प्रणिका कोयू -
सुदेश सत्याल -
जाउँ तिर्थ भनेर खप्तड गुफा ती इन्द्र नै पल्कीए
देवकी अभिलाषी -
ठोक्किएर जान्छ तिम्रो तस्बिर
मेरा आँखाहरुमा जब
वर्षौंजस्तो लाग्ने यो रात
आँखा खोलेरै निदाउँछु म
एक सेकेण्ड तिमी
मबाट टाढा हुनु पनि
पृथ्वी एकपटक घुम्न बिर्सिएझैं लाग्छ मलाई।
बुवा भन्थें– जिन्दगीमा साह्रै गाह्रो पर्यो, सरसल्लाह दिने मान्छे कोही भएन भने घरका जुवाभाटासँग सोध्नु, अनि जे राम्रो लाग्छ त्यही गर्नु। एसएलसी पास भएपछि मैले कहाँ, के, कसरी पढ्ने निर्णय गर्न सकिनँ। पहिला पो बुवा थिए र सिरानीमा हाल्ने पैसा दिन्थे। बुवा नभएपछि घर खर्च चलाउन एक एक पैसाको हिसाब राख्नुपर्थ्यो।
डा. रविन खड्का -
विद्यार्थी धेरै पर पुगिसकेको हुन्छ। डा.बस्नेत केही भन्न चाहेर पनि बोल्न सक्दैनन्। उनको मनमा अनौठो पश्चाताप मिश्रित विचार उत्पन्न हुन्छ। थचक्क सोफामा बस्दै टोलाउन थाल्छन्। सोच्दा सोच्दै उनी आफ्नो डेढ दुई दशक पुरानो अतितमा पुग्दछन्। त्यस्तै तथाकथित पाखे भेसमा पढ्न भनी शहर छिरेको, त्यसै गरी कोठा खोज्ने चक्करमा कैयौं दिन डुलेको अनि गतिलो एउटा कोठा नपाएर गरेको दृढसंकल्प सम्झछन् उनी।
डा. सुमनराज ताम्राकार -
शान्तिराम ढकाल -
शिरीष कुमार मौर्य, अनुवाद- सुदीप पाख्रिन -
भर्खरै थाहा पाएको हुँ मैले उनी फर्कि आएकी
उनी जो हाम्रो टोलको सबैभन्दा सुन्दर युवती थिइन्
अब आएकी छिन् सधैँको लागि विवाहको तीन वर्षपछि फिर्ता
शिव संकल्प -
दिनहरु बित्दै गए। मेरा मानसपटलमा ती युवती र त्यो बच्चाको अनुहार धमिलो धमिलो हुँदै गयो। शायद अघिल्लो वाक्य मैले गलत लेखेँ। ती आँखाहरू धमिला हुने किसिमका थिएनन्। सुदूर मानसपटलमा गहिरो गरी कुँदिएका थिए ती।
नवीन विभास -
विप्लव ढकाल -
म मेरो जीवनभरिको सपना
उपहार दिन चाहन्छु तिमीलाई!
म आज तिमीलाई सुनाउन चाहन्छु यो कथा!
तिम्रो देश यतिखेर बृद्धाश्रम बनिरहेको छ!
तिम्रो देशका हरेक घरहरु
रोइरहेका बृद्धाश्रम बनिरहेका छन् आज!
तर म तिमीलाई
मेरो समयको अर्कै कथा सुनाउन चाहन्छु!
विनिता बराल -
कोठामा पुगुञ्जेल ऊ हिँड्न सक्ने अवस्थामा थिइन। मोटरसाइकलबाट झरेर डोर्याउँदै उसलाई कोठासम्म ल्याएँ। भर्याङमा वमिट गरिदेली भन्ने कत्रो पीर। के आपत आइलाग्यो। यस्तैमा काम लाग्छ भनेर यसले मलाई साथी बनाएकी होली।
धर्म सापकोटा (राजु) -
प्रसन्न घिमिरे -
चश्मा लगाएको मेरो आँखामा
उही छ त्यसको रङ, उस्तै छ त्यसको सिलाई पनि
खुइलिएको कतै देखिएको छैन अझै पनि
उध्रिएको, च्यातिएको होला र कतै?
आँखामा त आएको छैन
कि फेरि चस्मामा पावर थप्नु पर्ने भएको हो?